Published May 19, 2020 at 8:51 PM CDT
Caafimaadka Degmada Siouxland waxay soo weriyeen laba dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacday Gobolka Woodbury Talaadadii sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Waxaa jiray 50 xaaladood oo togan oo cusub. Tirada hadda jirta ee kiisaska togan ee galabnimadii Talaadada waxay ka badnaayeen 2,300.
Saraakiisha caafimaadka ee Degmada Dakota waxay sheegeen inaysan jirin wax xaalado ah iyo laba dhimasho oo dheeri ah oo tiradeedu tahay 16 iyo in kabadan 1,500 xaaladood oo togan. Hada waxaa jira 36 dhimasho ah oo ka dhacay Woodbury County iyo Degmooyinka Dakota.
Gudoomiyaha gobolka Reynolds ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay talaadadii inuusan u maleyneynin in gobolka uu si khaldan u maareeyay cabasho la xiriirta xaalada nabadgelyo ee goobta lagu iibiyo hilibka kaas oo markii dambe uu ka dillaacay COVID-19.
Sida ku xusan dukumiintiyada ay heshay wakaaladda wararka Associated Press, Iowa OSHA waxay qaadatay in kabadan labo asbuuc si ay u raadiso ugana hesho jawaab Tyson Foods cabasho bishii Abriil ee ku saabsan geedaheeda Perry.
Markaa waxay go'aamisay dadaalka shirkaddu inay ku ilaaliso shaqaalaha inay ahaato mid ku qanacsan kormeer la'aan.
Toddobaad ka dib markii cabashada la xirey, inka badan 700 oo shaqaale ayaa tijaabiyey COVID-19.
Magaalada Sioux City waxay qorsheyneysaa inay toddobaadkan ku dhawaaqdo ku saabsan barkadaha dabbaasha.
Badanaa barkadaha barkadaha qaarkood waxay furan yihiin waqtiga loogu talagalay maalinta Sabtida ee Maalinta Xuska. Si kastaba ha noqotee, Guddoomiyaha wuxuu amray in barkadaha oo dhami ay xirnaadaan ugu yaraan 27-ka May. Taasi waa Arbacada soo socota.
Waxaa la rajeynayaa inay dhowaan sameyso wax cusub.
Magaalada waxay qorsheyneysaa inay raacdo tilmaamaha CDC-da.
CDC waxay leedahay majiraan wax cadeymo ah in coronavirusku ku faafi karo barkadaha dabaasha, tubbada kulul, dabeysha ama meelaha biyaha lagu ciyaaro. Si kastaba ha noqotee, weecinta bulshada ayaa noqon karta arin.
Shaqaaluhu waxay hadda fiirinayaan inay bixiyaan adeegyo xadidan barkadda sida casharada dabaasha iyo nashaadaadka kale ee koox yar.
Sababta oo ah CVID-19 masiibada ah ee dadka u baahan caawimada biilasha korantadooda waxay heli doonaan kordhin marka ay dalbadaan caawimaad.
Hay'adda Waxqabadka Bulshada ee Siouxland waxay leedahay waqtiga kama-dambaysta ah ee Barnaamijka Caawinta Tamarta Guryaha ee Dakhliga Hooseeya ama LIHEAP uu hadda yahay Juun 30-keeda.
Celceliska abaalmarinta qoysaska ayaa ah $ 400. La xiriir Hay'adda Beesha ee Siouxland si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Local News LocalIowaSioux CityNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsTyson FoodsnewsDakota CountyCOVID-19SomaliOSHAWoddbury County
Xayiraadaha oo dhan ayaa laga qaadi doonaa gobolka oo dhan Jimcaha, May 15. Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqay warkaas subaxnimadeedii…
30-ka Sabtida sanadlaha ah ee Park ayaa dib loo dhigay laga bilaabo taariikhdeeda 4-ta Luulyo ee Sioux City sababta oo ah COVID-19.Shir jaraa'id oo khadka…
Waxaa jira afar dhimasho oo dheeri ah oo ka mid ah aagga mitir ee magaalada Sioux ee ka socda COVID-19 oo ah 30 qof oo ku kala nool labada Degmo ee…
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay xaqiijineysaa in labo caruur ah oo ku nool bariga Iowa
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay xaqiijineysaa in labo caruur ah oo ku nool bariga Iowa ay la xanuunsanyihiin xaalad la xiriirta COVID-19, oo…